Wiil Dhalinyar ah oo Shirkado Ganacsi ka sameeyey Baalashaynta Kabaha oo uu ku Shaqaysto iyo Higsigiisa | Saxil News Network
Wiil Dhalinyar ah oo Shirkado Ganacsi ka sameeyey Baalashaynta Kabaha oo uu ku Shaqaysto iyo Higsigiisa
Johannesburg (SAXILNEWS.COM)_Wiil u dhashay dalka Koonfur Afrika oo hore u iibin jiray Beedka oo uu Suuqyada magaalada Johannesburg la wareegi jiray, ayaa hadda horumar ka sameeyey Baalashaynta Kabaha, waxaanu samaystay Shirkad si gaar ah ugu shaqaysa oo Shaqaale iyo goobo ay ka hawlgashaba leh.
Ninkan Dhallinyarada ah oo la yidhaahdo Lere Mgayiya, waxa uu Kabaha ku Baalasheeyaa Madaarka Diyaaradaha ee ugu weyn dalka Koonfur Afrika ee magaalada Johannesburg, waxaanu sidoo kale meelo badan oo dalka ah ku leeyahay Shaqaale isaga u shaqeeya oo Kabaha Baalasheeya.
“Waxa aannu nahay Shirkadda Kabo-baalashaynta ama Kabo-casaynta ee ugu weyn Afrika. Magaalada Johannesburg waxa aannu ku Baalashaynaa in ka badan 350 Beer oo Kabo ah maalin kasta, halka sidoo kale aannu magaalada kale ee la yidhaa Cape Town ku Baalashayno 120 Beer iyo 120 kale oo magaalada Durban ah.” Sidaa ayuu yidhi Mulkiilaha Shirkadda Kabo-baalashaynta ee Lere’s Shoe Shine oo la hadlay qaar ka mid ah Saxaafadda dalkaas.
Waxa uu 45 Shaqaale ku leeyahay saddex Madaar oo waaweyn oo Koonfur Afrika ku yaalla sida Mgayiga u sheegay Warbaahinta, waxaannu ku hamiyayaa inuu xidhiidh la sameeyo da’yar Kabaha ku Baalashaysa Maraykanka, Ingiriiska iyo Afrika meelo badan oo ka mid ah sida uu warkan uu bixiyey ku sheegay Wiilkani.
Lere Mgayiya oo 40 jir ah oo aad u Labis qaad qurux badan, waxa sannadkii soo gala dakhli dhan 2.5 Milyan Rand ama Lacagta Koonfur Afrika ah oo u dhiganta $227,000 Doollarka Maraykanka ah, waana lacag aad u badan oo uu ku taajiray, Shirkadduna ku socoto.
Ka hor intaanu noqon Boqorka Kabo-baalashaynta Koonfur Afrika waxa uu ka shaqayn jiray inuu qaybiyo Tigidhada Diyaaradda Koonfur Afrika, balse ka dib waxa uu u dalacay inuu noqdo Kormeere.
Waxa uu ka tegay Shaqadaas ka dibna waxa uu ku biiray Qoyskiisa Ganacsi u gaar ah oo ay Xoolaha nool ku dhoofiyaan, waxaannu yidhi; “Waxaaan aad u jeclaystay inaan dibedda u baxo, marna soo noqdo, ka dib waxaan ku fikiray inaan hadafyo iyo guulo ii gaar ah dejisto.”
Ka dib, markii uu Qoyskooda weydiistay in lacag la amaahiyo si uu ganacsi gaar ah ugu furto, waxa shaqadii ka eryey Adeerkii, waxaannu shaqo la’aan ahaa muddo sannado ah, waxaana shaqadii kala wareegay Walaalkii oo ay isku Hooyo yihiin.
Waxa uu xidhiidh la lahaa dad Beeralay ah oo Digaagga dhaqda, ka dibna waxa uu bilaabay inuu Beedka u iibiyo, isagoo Kartoonka ka heli jiray $6, taasna kumuu qancin, waxaanu yidhi isagoo dareenkiisaas ka warramaya; “Waxa aan dareemay in aan waday arrintan lacag la’aan. Lacag maan haysan aan Gaadhi ku wato oo aan alaabta ku iibiyo, markaad hawshan oo kale waddana waxaad u baahan tahay Lacag badan si aad Ganacsigaaga ugu dhaqaajin karto uguna wadi karto.”
Waxa ka baabba’ay Digaaggii iyo hawlshii Beed iibinta, laakiin waxa uu bilaabay inuu fikrad ganacsi telefiishan ka baahiyo, kaasoo inta badan lagu soo bandhigo fikrado ganacsi, waxaanu ku guulaystay 35,000 Rand oo lacagta Koonfur Afrika ah oo u dhigtanta $3,100 Doollar muddo laba maalmood gudahood ah.
Waxa uu ku bilaabay ganacsi muddo u socday, balse 6 bilood ka dib ganacsigii wuu ka burburay, waxaanu soo istaagay Lacag la’aan, ka dib waxa uu Madaarka Cape Town ee dalka Koonfur Afrika Maamulkiisa ka codsaday in ay shaqo u dhiibaan ama uu Kabaha u baalasheeyo dadka, isagoo codsigiisa u gudbiyey bishii November ee sannadkii 2002 Maamulka Madaarkaas oo go’aankooda oggolaanshahana siiyey September 2003, waxaanu muddo ku shaqaynayey inuu noqdo soo dhaweeye.
Ka dib, waxa uu go’aansaday inuu Shirkad Kabaha Baalashaysa Garoonka Diyaaradaha Cape Town ka furo, inkastoo loollan adagi ka hor yimi, haddana wuu ku guulaystay, ka dib markii uu u dhabar adaygay. Waxaanay tani tusaale u tahay Dhalinyaro badan oo Afrikaan ah oo dalalkooda horumar ballaadhan oo dhinacyo badan leh ka samayn kara iyagoon meel fog wax ka doonaan, haddii ay si fiican u fikiraan oo ay qorshayaal meel-mar ah iyo hal-abuurnimo ay wax ku bilaabi karaan la yimaaddaan.